Nin diiday abaal marin lagu siin rabay baadi uu dib u celiyay | Biyoguurenews.com
Home Wararka Nin diiday abaal marin lagu siin rabay baadi uu dib u celiyay
Nin diiday abaal marin lagu siin rabay baadi uu dib u celiyay
Nin dhalinyaro ah oo mid ka mid ah jidadka magaalada Rome ee dalka Talyaaniga ka helay boorso ay ku jirto lacag caddaan ah oo dhan €2,000 (£1770; $2200) ayaa diiday inuu qaato wax abaalmarin ah ama baadifur ah, ka dib markii uu boorsadii iyo lacagtiiba dib ugu celiyay qofkii sida saxda ah u lahaa.
Mossan Rasal, oo 23 jir ah, una dhashay waddanka Bangladesh ayaa si toos ah u aaday saldhigga booliska ka dib markii uu helay baadida maalintii Jimcada.
Ka dib waxaa la diyaariyay kulan dhex maray isaga iyo ninkii lahaa badidaas si uu uga guddoomo Mr Rasal.
Waxaa loogu mahad celiyay daacadnimadiisa, laakiin isagu wuxuu sheegay “inuusan wax khaas ah oo wanaagsan sameynin”, wuxuuna intaas ku daray: “Lacagta anigu ma aanan lahayn”.
“Ma aanan garaneynin tirada lacagta ku jirta boorsada sababtoo ah ma aanan tirinin, isla markii aan arkayba iyadoo sideeda ah ayaan geeyay saldhigga booliska”, Mr Rasal ayaa sidaas yiri mar uu Aaxaddii la hadlayay wargeyska maalinlaha ah ee kasoo baxa Talyaaniga, ee lagu magacaabo La Repubblica.
“Waxa aan sameeyay wuxuu ahaa inaan daacad noqdo, sidaasna waxaa horay ii soo baray qoyskeyga”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Boorsada uu ninkan helay waxaa sidoo kale ku jiray dhowr kaar oo kuwa bangiyada lacagta loogala baxo ah, shatiga gawaarida lagu kaxeeyo iyo warqado kale oo aqoonsiyo ah, sida ay boolisku sheegeen.
Mr Rasal, oo meherad ganacsi oo yar ku leh bartamaha magaalada Rome ayaa caasimadda Talyaaniga ku noolaa muddo 7 sano ah. Wuxuu sheegay inuu aad u farxi lahaa haddii uu ninka boorsada baadida ah leh, oo ganacsade ka ah magaalada, uu bakhaarkiisa yar booqdo, isla markaana ka noqdo macmiil joogto ah.
Previous articleAskari Laascaanood Ku Dilay Askari Kale
Next articleBerbera, Duqa Degmada Berbera o Shan baabuur Lankurusero ah iyo Dhisme xarun Ciidan ku Wareejiyay wasarada Arimaha Gudaha iyo Booliiska Somaliland